ကြေးနီ, လူမီနီယမ်, သံသံမဏိ, ရွှေ, ငွေအရည်ကျိုမီးဖိုအရည်ပျော် induction
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction အရည်ပျော် / induction အရည်ပျော်
အမျိုးအစား: induction အရည်ပျော် Tags: သော induction အရည်ပျော်, သတ္တု induction အရည်ပျော်, သော induction အရည်ပျော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်, induction အရည်ပျော်, အရည်ပျော်မှု, အရည်ပျော်သော induction မီးဖိုထဲ, အရည်ပျော်နေသောသတ္တု, သတ္တုသော induction အရည်ပျော်
သော induction အရည်ပျော်ကဘာလဲ?
induction အရည်ပျော် ၎င်းသည် induction furnace's crucible တွင်အရည်ကိုအရည်အဖြစ်သို့အရည်ပျော်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အရည်ပျော်သောသတ္တုကိုမီးဖိုပေါ်မှသွန်းလောင်းလေ့ရှိသည်။
induction အရည်ပျော် အလွန်မြန်ဆန်သည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အခါ induction အရည်ပျော်ကအခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူလိုအပ်သောသန့်စင်စင်မြင့်ကိုကျော်သွားဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်စင်ကြယ်၏။ သတ္တုအတွက်သွေးဆောင်အဆိုပါယူနီဖောင်းအပူလည်းအရည်အသွေးမြင့်အဆုံးရလဒ်တေယျ။ HLQ သော induction အရည်ပျော်မီးဖို Ergonomics advanced features တွေပါပွီ။ သူတို့ကသာအလုပ်ခွင်ဘေးကင်းအောင်, သူတို့အရည်ပျော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုအဆင်ပြေအောင်နေဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်။ ဒါကြောင့်အဘယ်မှာသုံးထားသလဲ? ထားဝယ် induction အရည်ပျော်စနစ်များ foundries, တက္ကသိုလ်များ, ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်သုတေသနစင်တာများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါစနစ်များကို ferrous နှင့် Non-ferrous သတ္တုကနေနျူကလီးယားပစ္စည်းမှအရာအားလုံးနှင့်ဆေးဝါး / ပါးစပ်တွင်းသတ္တုစပ်အရည်ဖြစ်ကြ၏။
အဘယ်အရာကိုပစ္စည်းကိရိယာများ / မီးဖိုရရှိနိုင်ပါသလဲ
HLQ သော Induction Heating Machine Co သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုပေးသည် သော induction အရည်ပျော်မီးဖိုထဲ အရည်ပျော်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံကိုက်ညီဖို့နေကြပါတယ်: ကွိုင်, စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ခြင်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းရွေ့လျား Single-ဝင်ရိုး tiltpour, Dual-ဝင်ရိုး tiltpour ။
induction နှင့်အတူလျှပ်စစ်အရည်ပျော် Furance